Headline Nepal | बलात्कार मुद्धामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावको पहिलो रियाक्सन बन्यो मिरुना घटना !
बलात्कार मुद्धामा हदम्याद हटाउने प्रस्तावको पहिलो रियाक्सन बन्यो मिरुना घटना !
१७ जेठ, काठमाडौं । बलात्कार केशमा या मुद्धामा एक बर्षे हदम्याद हटाउने प्रस्तावको पहिलो रियाक्सन नायिका मिरुना मगर घटना बनेको छ ।
नायिका मिरुनाले आफूमाथि ‘ब्याड टच’ गरेको भन्दै लामाको भेषमा रहेका मुगुका फुर्वा लामालाई अभद्र ब्यवहार गरेको आरोप लगाइन । त्यसपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
सुन्धारास्थित सिभिल मलमा फिल्म ‘कबड्डी-४’ हेर्न लामा पुगेका थिए । एक दर्शकको रुपमा पुगेका उनलाई नायिकासँग सेल्फि खिच्न इच्छा जाग्यो । सेल्फि खिच्नेक्रममा उनलाई पछाडीबाट केही साथीले धकेल्दा नायिकालाई छोइएछ । त्यसपछि उनले आफुले नियतवश नभई झुक्किएर छुन पुगेको भन्दै माफी समेत मागे । तर पनि उनले सबैको सामु नायिका मगरको हातबाट झापड खानुप¥यो ।
लामाले प्रहरी समक्ष दिएको बयानमा आफु कहिल्यै पनि यस्तो घट्नामा नपरेको र केही हुने हो कि भन्ने डरले बोल्न नसकेर अन्तिममा सार्वजनिक रुपमै माफी मागेको बताएका छन् ।
तर, नायिकाले ‘कार्यक्रममा धेरै भिड रहेको र प्यानहरूसँग सेल्फी खिचिरहेको अवस्थामा हल्का छुने त भइहाल्छ नि भनेरै मैले बुझे । तर म अगाडि फर्किएर फोटो खिच्दै गर्दा पछाडि कसैले देब्रे साइडमा चिमोटेको फिल भयो । सुरुमा केहि पनि होइन होला भनेर केही पर सरे, फेरि अर्को पटक अलि बढी भएको महसुस गरे । तेस्रो पटक चाही एकदमै दुख्ने गरेर पक्रिएपछि प्रतिकारमा उत्रिएकी हुँ । आफुले प्रतिकार गर्दै सुरुमा एक थप्पड हानेकी हुँ । थप्पड हानेपछि उनलाई भिक्षुकको भेषमा देख्दा झन रिस उठ्यो’, भनेकी छन् ।
उनले अगाडि थपिन, ‘त्यहाँ धेरै भिड भएकोले त्यो कुरोले मलाई लाज भयो । बाहिर निस्किएर रोए पनि । मैले कमजोर फिल समेत गरे । फेरि यो सही भएन भन्ने लाग्यो । फर्केर हेर्दा त्यो व्यक्ति हाँसेर डुलिरहेको देखेपछि झन रिस उठ्यो । त्यसपछि कानुनको सहारा लिएँ ।’
लामा पक्राउ परेपछि लामाका समर्थकहरुले आज विहानै देखि नायिकाविरुद्ध प्रर्दशन गरेका छन् । उनीहरुले काठमाडौंका केही फिल्म हल अगाडि ‘कबड्डी ४’को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै फिल्मको पोस्टर र नायिकाको फोटो समेत दहन गरेका छन् ।
नायिका मगरले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने, लामा विना शर्त रिहाइ हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वत्र विरोध भएपछि नायिका मगर उजुरी फिर्ता लिन बाध्य भइन । उनले उजुरी फिर्ता लिदै भनेकी छन्, ‘आफु आवेगमा आएर उजुरी गर्नु गल्ती भयो ।’
त्यसपछि बौद्ध भिक्षुक समेत रहेका लामा रिहा भएका छन् । उनलाई तीन हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ । यो घटनाको पक्ष विपक्ष लिनु भन्दा पनि यस घटनाबाट समाजमा अराजकता बढेको देखिन्छ । कसैले आरोप लगाउँदैमा अपराधी मान्ने र कानुनी कठघरामा लैजानु हाम्रो देशको कानुन नै लजास्पद छ । सायद, यो भन्दा फरक नपर्ला, ‘नेपालमा मान्छेको स्तर हेरेर कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ ।’
अहिले हाम्रो देशमा सबैको ध्यान बलात्कारजन्य केशहरुमा गएको छ । किनभने पछिल्लो समय यौनजन्य विभिन्न घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । घटना बढ्दै गएपछि अहिले बलात्कार घटनामा राखिएको एकवर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । हदम्याद हटाए बलात्कार घटनामा कमी आउने विश्वास गरिएको छ । तर हदम्याद हटाए झन समाज नै उथलपुथल हुने सम्भावना वढेको छ ।
कतिपय यस्ता घटना बाहिर आएका छन् जुन घटनाले बास्तविक पिडितलाई भने ओझेलमै पारिदिने खतरा बढेको छ । एउटा नेपाली उखान छ, ‘बनको बाघले खवोस नखावोस, मनको बाघले खान्छ ।’ त्यसैले महिला र पुरुष दुवैको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । अहिले महिला देखे पुरुष र पुरुष देखे महिला डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । समाजमा बिग्रंदै गरेको मनोविज्ञानलाई सही ट्याकमा ल्याउन नैतिक शिक्षाको पनि अभाव खड्किएको छ । अब नैतिक शिक्षाको पाठ पढाउन नसक्ने हो भने बलात्कार र यौनजन्य हिंसा घट्ने होइनन, बढ्ने नै देखिन्छ ।
हदम्याद हटाउने प्रस्ताव